Home Wararka Koox hubeysan oo gaari xamuul ah ku weerartay deegaanka Marsabit ee Kenya
Koox hubeysan oo gaari xamuul ah ku weerartay deegaanka Marsabit ee Kenya
Koox hubeysan oo burcad ah ayaa weerar geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ku qaaday gaari ay saarnaayeen dad farabadan, waxaana weerarkaas uu ka dhacay gudaha dalka Kenya, sida ay sheegayaan wararka la helayo.
Weerarka oo loo adeegsaday rasaas laga riday qoryo Ak-47 ayaa lagu qaaday gaari nooca xamuulka qaada oo ay saarnaayeen dad shacab ah, xili uu marayay inta u dhexeeysa Magaalooyinka Marsabit iyo Badasa ee dalka Kenya.
Inta la xaqiijiyay weerarka ayaa waxaa ku geeriyooday 8 qof oo kamid ahaa dadkii saarnaa gaariga, halka ay dhaawacmeen 11 qof kale, kuwaasi oo si deg deg ah, weerarka kadib lagu geeyay Isbitaalka weyn ee Ismaamulka Marsabit.
Dadka dhintay ayaa isugu jiray shan dumar ah iyo saddex rag ah oo la socday gaariga ay weerareen kooxda hubeysan ee burcada aheyd oo markii dambe goobta si dhaqsi ah uga carartay, waxaana halkaas gaaray Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Kenya.
Guddoomiye ku-xigeenka dowladda dhexe ku matala ismaamulka Marsabit ee Kenya David Saruni oo weerarka ka hadlay ayaa sheegay in falkan uu ka dhacay meel 5 kiilomitir u jirta magaalada Marsabit, uuna jiro khasaaro kala duwan oo ka dhashay.
Guddoomiye ku-xigeenka ayaa tilmaamay in ciidamo ka tirsan laamaha ammaanka isla markiiba goobta loo diray, isla markaana ay wadaan howlgal lagu baadi goobayo dadkii ka dambeeyay weerarkii dhacay, ayna gacanta ku soo dhigi doonaan.